Travel By Train In Budapest: 10 Zavatra Tokony ho Fantatrao | Save A Train
Home > Travel Europe > Travel By Train In Budapest: 10 Zavatra Tokony ho Fantatrao
Budapest Azo antoka ny foiben'ny ny Hongria. Tena afovoany hevitra raha ny amin'ny Travel lamasinina tao Budapest maro ny fiarandalamby intsony. Raha Travel lamasinina tao Budapest, ary amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra ary matetika Zava-baovao maro ny olona, Mety ho kely kozatra-wracking indraindray, indrindra fa ao amin'ny vaovao sy vahiny tanàna. Ataovy ao an-tsainao miadana, ary hojerentsika ny 10 ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fiarandalamby mandeha any Budapest.
Misy telo lehibe gara izay afaka mamakivaky lamasinina tao Budapest tamin'ny ary izy ireo:
east: Any amin'ny Atsinanana. Izany no tena iraisam-pirenena sy ny intercity gara any Budapest.
west: Miorina ao amin'ny West.
Deli: Any amin'ny tany atsimo
Ny gara akaiky indrindra an'i Budapest Airport Terminal 2 dia Ferihegy, amin'ny fiaran-dalamby miasa ny sy ny Nguyati gara any Budapest.
Raha toa ianao ka mandeha manodidina ny tanàna akory va backpacks, poketra na hafa tanana entana antoka mba hitahiry izany teo amin'ny tany eo ny tongotra mandritra ny diany eo amin'ny fiaran-dalamby ho eo amin'ny lafiny soa aman-tsara.
Safety ho an'ny Vehivavy
Ny vehivavy dia afaka mahatsapa miadana, rehefa mandeha lamasinina manodidina Budapest. Ny afovoan-tanàna dia tena azo antoka ho an'ny lehibe sy ny tanàna, raha mbola lavitra ny mahazatra mampiasa saina ary aza maka ny mety tsy ilaina fotsiny satria vakansy dia azo antoka fa tsy hisy loza ho avy amin'izy ireo.
Mpizaha tany no tena mety mba haka-in nataony am-paosy feno fitateram-bahoaka toerana toy ny gara, toerana hafa kely halatra mety hitranga. Na dia izany no tsy mahatonga ny lehibe Nanoro hevitra momba ireo mpitsidika mba mahafantatra sy mijanona mailo.
mahazo Around – Travel lamasinina any Budapest
Misy isan-karazany ao amin'ny Budapest lalamby sy ny fiaran-dalamby Travel teny ny ankamaroan'ny ny fitateram-bahoaka izay midika hoe afaka mahazo fotsiny na aiza na aiza lamasinina. Aza adino ny mijery ny fotoana sy ny isan-karazany ny tsipika dia mila mandray mba hahazoana ny toerana halehany. Afaka mahita an'io ianao fampahalalana momba ny dia an-tserasera na any amin'ny gara. Azonao atao koa ny mividy tapakila am-peo.
Rehefa ianao dia efa tao Budapest iray na roa andro, ary efa nahazo ny bearings, aza hadinoina ny hahazo Budapest Card. Manome ny karatra maromaro Extras toy ny fidirana maimaim-poana any an- tranombakoka, maimaim-poana fiara fitateram-bahoaka/fiaran-dalamby / tram / rano Tsidika, sy ny rano Cruise.
Travel lamasinina tao Budapest Day Trips
Misy maromaro andro mahafinaritra fitsangatsanganana mba haka raha manao Travel lamasinina any Budapest. Dia hitondra anao any ny sasany tsy mampino toerana ary hanambara aminareo ny mahatalanjona toerana manodidina teny an-dalana. Aoka ho azo antoka ny hanao ny fikarohana alohan'ny. Ataovy azo antoka anao hahazo ny tena avy amin'ny fotoana teto amin'ity tanàna ity.
Budapest manana ny sasany amin'ireo tranainy sy tena tsara tarehy gara tany Hongria. Aza adino ny mitsidika ny Eastern Railway Station (Atsinanana Railway Station) ary ny Western Railway Station (west Railway Station) ary ianao dia tsy maintsy hahatongavana any izy ireo amin'ny Travel lamasinina any Budapest, raha ianao no misy ka mitampisaka amin'ny tantara sy ny mampitolagaga Budapest trano izay tsy maintsy atolotra.
Ny History of the Railway-dalana,
Ny andalana ao amin'ny Budapest M1 no faharoa-tranainy indrindra lalamby ambanin'ny tany andalana eto amin'izao tontolo izao. Efa teo amin'ny asa hatramin'ny 1894 ary aza ho toy ny lisitra UNESCO World Heritage Site. Misy izany be tantara amin'ity tanàna ity sy ny fiaran-dalamby efa nampiasaina nandritra ny taona, ary mbola mihazakazaka mahomby.
Budapest tena no manana izany rehetra, sady toy ny malaza mpizaha tany toerana halehany. Nahoana no tsy ho tahaka ny an-toerana sy hampiasa ny fiaran-dalamby ho toy ny endriky ny fitateram-bahoaka? Tsy ho diso fanantenana!
Famandrihana A Train Ticket in for European mandeha? Nahoana raha 3 minitra eo amin'ny toerana mora indrindra mba hahitana ny tapakila ho an'ny lalana. Login antsika Vonjeo A Train tranonkala ankehitriny. Tapakila azo vola ho amin'ny fomba maro, ny zava-drehetra mba hahatonga ny traikefa ho mora araka izay azo atao.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)